Ma ogtahay in uu jiro adeeg talo bixin caafimaad oo Af-Soomaali ah? | Somaliska
Dadka ku nool gobolka Stockholm waxay heli karaan adeeg talo bixin caafimaad oo Af-Soomaali ah. Wac 0771-1177 91 haddii adiga ama ilmahaagu jirrado, is dhaawaco ama u baahanyahay talobixin caafimaad. Markaa waxaad la hadli doontaa kalkaaliso caafimaad oo Af Soomaali lagaaga turjumayo.
Waxaad u wici kartaa dhammaan su´aalaha quseeya daryeelka caafimaadka iyo jirrada , dhibaatooyinka yaryar iyo kuwa waaweynba. Haddii aad u baahantahay inaad daryeel caafimaad hesho, waxay kalkaalisadu kaa caawinaysaa helitaanka xarunta caafimaad ee saxda ah.Talobixintu waa bilaash, wicitaankuna wuxu la qiimo yahay wicitaan telefoon oo caadi ah. Talobixinta caafimaad ee telefoonka ah darteed, uma baahnid in aad aaddo qaabilaadda degdegga ah ama xarunta xannaanada caafimaadka, ayada oo aanay qasab ahayn. Waxa kuu baaqanaya wakhti iyo lacag labadaba. Talobixintu waxay furantahay maalin kasta 08.00-22.00. Sidoo kale waxaad booqan kartaa 1177.se ama waxad wici kartaa lambarka telefoonka ee ah 1177 si aad af Iswiidhish ugu hesho caawimo iyo warbixin. Haddii aad u baahantahay, ambalaas waxad mar walba wici kartaa 112. Soo dhawoow!
Adeega turjumaada Af-Soomaaliga ayaa si tijaabo ah loo bilaabay sanadkii 2012, iyadoo ka dib uu maamulka gobolka Stockholm go’aamiyay in rasmi laga dhigo maadaama la dareemay baahida jidha. Hadaba haddii aad u baahantahay talo bixin caafimaad waxaad wici doontaa nambarka: 0771-11 77 91.
BAAFIN: Ma aragtay Ahmed?
Xisbiga Vänsterpartiet-ka: “Xarruumaha caafimaadka degmmadda ha shaqeeyaan 24 saac”
sumaya aniga ayaa war ka haayo waxaan arkey famil arinta labada sanno muddoo lagu heystey oo negative la siiyey hadda dacwooda dib ayey u xereysteen ogolanshona waa la siiyey
ma wici karaa walaal nambarka talo bixinta aniga oo meel kale degen mase waa shardi in aan stockholm deganahay
January 3, 2015 at 01:30
Goormee heleen ogolaanshaha . Iyo goorta la diiday ma mid dhawaa mise hore. To adan
labo sao says:
January 3, 2015 at 09:25
sac dhaman aniga xiita wan ku jiira dadka labada sano
oo waxan suugayay mudo shan sano kun did mona wan qatay laakin hada intii lafuray ayan dhiig cusub somaray oo aniga ma wacan iyaga ii wacay hadana waxan kasugaya jawab khayr qabta xiita waxa jiira dad aan isku xafad nahay oo lowacay oo dhiig marayo
asc dhaman aniga xita wan kujira dadka labada sano iyo somaalinimada soocadey ,didmo badana wan qatey ,lakin sanadki 2013 agosto ayan dacwad cusub xarestey wax dhiigna manalaqaadin,hada waxan sugaya jawabta sanad iyo todoba bilod,marka akhyarta qof sideyda camal maaragten,tak
horta dhiiga aad sheegeysaan wamaxay? meesha dhiiig leyskama qado, waa canduuf afka laga qaado.
Walalo arinti 2da sano ayan war farxad badan kasida iyo talooyin Fcn alx waan kugulaysaty wana la ii ogolaaday diidmo la aan lkn qaab wacan aya jira sidii cadiga war soo dhaaf iinsha allah inti wax kamaqan allah. Ha u sakhiro
brown,qaab nocee bro
January 5, 2015 at 05:54
Fadlan mawduucan la qoray wax ku saabsan soo comment gareeya… Wixii su’aalo kale meel kale ayaa loogu tala galay arintan Labada sano ayaan somaliska u nacay wlhi qol sanaysta oo u bixiya arina Labada sano.!!!!! Jimcaale Sxb dhaqtarkan ma caawin karaa qof gobol kale dagan oon ahayn Stockholm?????
sxb alaha khayr kusiyo ino fahfahi qabka lagu ogoladey Bromw thnkx
Kkkkkkk waayo arag waaruntaa